Safaarada Sweden ee Nairobi oo Somalida ku sii yaraaneyso | Somaliska
Safaarada Sweden ay kuleedahay wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa ahayd mid aad mashquul u ah sanadihii 2010, 2009 Iyo 2008 dii iyadoo inta badan la arki jiray dad badan oo soomaliyed oo saf ugu jira in loo qabto adeegyo kala duwan oo ayka midyihiin sida dad balan cusub qabsanaya, kuwa form xareynaya, qaar form visa xareynaya iyo kuwakale. Hadaba bilihii ugu dambeyay ayaa laga dareemayay in dadka soomalida ay gabaabsi kusii noqonayaan safaarada Sweden ay kuledahay nairobi. Arintan ayaa loo aanaynaya xanibaada lagu so rogay mideynta familada Soomaalida. Qaarbadan oo ka mid ah dadkaan soomaliyeed ayaa kawardhooraya go'aanka ay qaadandoonaan baarlamanka Sweden 30ka bisha Maarso. Sikastaba dadka soomaaliyeed ee kusugan wadankan Kenya ayaa kacodsanaya Sweden in reerahooda daganaashaha kahelay Sweden lala mideeyo. C/wahab Hasan Julux, Nairobi Kenya
Safaarada Sweden ay kuleedahay wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa ahayd mid aad mashquul u ah sanadihii 2010, 2009 Iyo 2008 dii iyadoo inta badan la arki jiray dad badan oo soomaliyed oo saf ugu jira in loo qabto adeegyo kala duwan oo ayka midyihiin sida dad balan cusub qabsanaya, kuwa form xareynaya, qaar form visa xareynaya iyo kuwakale.
Hadaba bilihii ugu dambeyay ayaa laga dareemayay in dadka soomalida ay gabaabsi kusii noqonayaan safaarada Sweden ay kuledahay nairobi. Arintan ayaa loo aanaynaya xanibaada lagu so rogay mideynta familada Soomaalida.
Qaarbadan oo ka mid ah dadkaan soomaliyeed ayaa kawardhooraya go’aanka ay qaadandoonaan baarlamanka Sweden 30ka bisha Maarso. Sikastaba dadka soomaaliyeed ee kusugan wadankan Kenya ayaa kacodsanaya Sweden in reerahooda daganaashaha kahelay Sweden lala mideeyo.
C/wahab Hasan Julux, Nairobi Kenya
Dhaman malin wanagsan intas kadib aad aan uga xumahay xalada ku dhacday somaliada sweden maxa yelay qof ciyalki ama xaski meelkala kajogo wa dhib weyn marka waxan sugna wa go anka barlamanka 30 marso insha allah kheyr ayana filaya